फेसबुकलाई डिसीमा मुद्दा, ठूला आइटी कम्पनीले किने फेसबुकका सूचना, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
फेसबुकलाई डिसीमा मुद्दा, ठूला आइटी कम्पनीले किने फेसबुकका सूचना
डिसी नेपाल , ५ पौष २०७५
यादव राज जोशी
डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाका महान्याधिवक्ता कार्ल रेसिनले बुधबार फेसबुक विरुद्ध मुदा दायर गरेका छन् । उनले फेसबुकमाथि प्रयोगकर्ताको तथ्यांक सुरक्षित राख्न नसकेको अभियोग लगाएका छन् । तेस्रो पक्षले बनाएका एप्लिकेसन (एप्स) राम्रो अनुगमन गर्न नसक्दा विभिन्न एप्स निर्माताले प्रयोगकर्ताका महत्वपूर्ण सुचना चोरी गर्ने गरेका थिए । यसैगरी, फेसबुकले विभिन्न ठूला व्यवसायिक फर्मलाई प्रयोगकर्ताको सुचना बेचेको समेत पाइएको छ ।
क्याम्ब्रिज एनालेटिकाले आठ करोड ७० लाख प्रयोगकर्ताको सुचनामा पहुच समाचार सार्वजनिक भएपछि थप जानकारी बाहिर आउन थालेका हुन् । त्यस्तै सोनी, माइक्रोसफ्ट, एमाजोन, गुगल, रोयल बैंक अफ क्यानडा जस्ता कम्पनीलाई प्रयोगकर्ताको इमेल, टेलिफोन नं. उपलव्ध गराएको थियो भने नेटफ्लिक्स र स्पोटिफाईलाई प्रयोगकर्ताको म्यासेजसम्म पहुँच दिएको थियो । सर्च इन्जिन बिडलाई फेसबुकको सम्पूर्ण जानकारीमा पुग्न सक्ने बाटो दिइएको थियो । ठूला कम्पनीलाई सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म फेसबुकले निर्वाध प्रयोगकर्ताको सुचनामाथि पहुँच दिएको थियो ।
अमेरिकाको गोप्यता सम्वन्धि कानुनमा कुनैपनि कम्पनीले उपभोक्ताको सुचना सार्वजनिक गर्न वा अरुलाई दिन वा बेच्नमा बन्देज लगाएको छ । फेसबुकका गोप्यता निर्देशक डेभिड भाल्देकले प्रयोगकर्ताको सुचनामा पहुँच दिदाँ गोप्यता सम्वन्धि कानुन पूर्ण पालना भएको दावी गरेका छन् । कतिपय तेस्रो पक्षले फेसबुकको स्विकृति बेगर नै तथ्यांकमा पहुँच गरेका छन् । फेसबुकले सुचनामा पहुँच दिने सम्झौता गर्दा गोप्यता कानुन उलंघन भएको छैन ।
फेसबुक प्रयोगकर्ताको सुचनामा संवेदनशील हुन थालेको सन् २०१८ को अप्रिलपछि मात्र हो । गत अप्रिलमा फेसबुकका प्रमुख कार्यकारी मार्क जुगेरवर्कले फेसबुकको गोप्यतामाथि पूर्ण नियन्त्रण रहेको दावी गरेपनि उनको असत्य भएको पाईएको छ । गत सेप्टेम्बरमा तेस्रो पक्षले बनाएको एउटा एप्सले प्रयोगकर्ताले अपलोड गरेको तर सार्वजनिक नगरेका फोटो र भिडियोसम्म पहुँच बनाएको थियो ।
प्रयोगकर्ताको स्वीकृति बिना फेसबुकले क्याम्ब्रिज एनालेटिका र अन्य तेस्रो पक्षलाई सुचनामा पहुँच दिएर गम्भीर गल्ती गरेको छ, महान्याधिवक्ता रेसिनले भने, यो गोप्यता कानुनको उलंघन हो । आज दायर गरिएको मुद्दालाई प्रयोगकर्ताको सुचना सुरक्षित गर्न फेसबुकलाई बाध्य बनाउने रेसिनले बताए ।
डिसी प्रशासनले दायर गरेको मुद्दा सन् २०१४ मा प्रयोगकर्ताका साथी समुहको जानकारी लिने एप्सलाई फेसबुकले नियन्त्रण नगरेकोसंग सम्वन्धित छ । त्यसबेला डिसी महानगरमा बसोबास गर्ने तीनलाख ४० हजारको सुचना चुहिएको थियो । तर, उक्त एप्सले आठसय ६० जना प्रयोगकर्ताको साथीहरुको जानकारी डाउनलोड गरेको थियो ।
सोनी,माक्रोसफ्ट,एमाजोन,गुगल,रोयल बैंक अफ क्यानडा, नेटफ्लिक्स र स्पोटिफाई जस्ता कम्पनीले फेसबुकबाट लिएको सुचनाको आधारमा आफ्नो मार्केटिड।राणनीति बनाई व्यापार बढाएका थिए । त्यसबाट फेसबुकले पनि राम्रो आम्दानी गरेको थियो । फेसबुकका विश्वका दुई अर्ब २० करोड प्रयोगकर्ता छन् ।
फेसबुकले प्रयोगकर्ताको गोप्यता उलंघन गरेको सम्वन्धमा विश्वभरी अध्ययन अुनसन्धान भैरहेको छ । अमेरिकी काँग्रेसले विभिन्न विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । बेलायतको संसदको एक समितिले यसै महिनाबाट फेसबुकबाट लिएको सुचनालाई ठूला कम्पनीले कसरी प्रयोग गरे र कस्तो फाईदा लिए भन्ने अध्ययन सुरु गरेको छ । स्रोतः सिएनएन, न्यूयोर्क टाइम्स, ब्लुम्बग, एनपिआर आदि
गुठी विधेयक हंगामाः कांग्रेस सडकमा, नेपालबन्दको नै आव्हान गर्यो हिन्दु संगठनले । Guthi l
सत्ता पक्ष सांसदको अभिव्यक्तिः गुठी विधेयकका विरोधी भाडाका मान्छे हुन्। Ganga Chaudhary l Guthi l
गुठी विवादबारे प्रधानमन्त्रीले एयरपोर्टमा के भने ? PM KP Oli Speech in Airport l Guthi l
गुठी विवादले तात्यो संसद । Samsad | Birodh Khatiwada |